प्रश्न र उत्तरहरूमा क्लोक्सब्लल
यदि तपाईंले गर्भवती सिक्नु पर्छ कि नगर्नु आवश्यक छ भने, स्पष्टब्यूबल परीक्षण प्रयोग गर्नुहोस्, जसले आज आज स्त्री वैज्ञानिकहरूको सिफारिश गर्दछ। अ English ्ग्रेजी ब्रान्ड 1 198 55 मा होम-आधारित निदान यन्त्रहरू जुन 47 47 देशहरूमा लागू गरिएको हो।
सुपर-संवेदनशील गर्भावस्था परीक्षणले स्थिर चक्बनको साथ उच्च-सटीक परीक्षण गर्दछ, उत्पादनकर्ताहरूको रूपमा प्रयोगशाला परिणाम - 2-30--300 मह / ML। तुलनाको लागि परम्परागत परीक्षण प्रणालीको संवेदनशीलता - 10-20 मह / ML.
कम्पनीको प्रयोगको लागि निदान परीक्षण उपकरणहरूको निर्विवाद सुविधाहरू eccopic गर्भावस्थाको पहिचान हो, कुनै पनि ब्रान्डको उपकरण छैन। यस दिनको कुनै पनि समयमा निर्देशनहरू अनुसार परीक्षण प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, परिणाम एक मिनेट पछि देखा पर्नेछ।
इलेक्ट्रोनिक गर्भावस्था परीक्षणको अवधारणा पछि एक महिला मूत्रमा आधारित इलेक्ट्रोनिक गर्भावस्था परीक्षणको आधारमा। अध्ययनले देखाउँदछ कि सब भन्दा भरपर्दो परिणाम प्राप्त हुन्छ, किनकि हर्मोन एकाग्रता अधिकतम मूल्यमा निर्भर गर्दछ, तर स्पष्ट नीलो डिजिटल स्ट्रिपहरू।
कागज स्ट्रिप-सूचकलाई स्पष्ट निलोको सूचकमा तरल पदार्थबाट विशेष ट्यूबल्सहरू छन् (पेशाब) एक निश्चित मार्क को लागी, र त्यसपछि परीक्षण एक नकारात्मक वा सकारात्मक परिणाम देखाउँदछ। डिजिटल खाली निलो को केहि प्रकारहरु मात्र पुष्टि वा गर्भावस्था को तथ्यलाई प्रमाणित गर्दैन, तर2हप्ताको शुद्धताको साथ एक हसल अवधि पनि स .्केत गर्दछ।
CONONICE Gondudrootific हर्मोन को उपस्थिति र उच्च स्तरमा, परीक्षण क्षेत्र एकदम दोस्रो पट्टी को रूप मा चित्रित छ, जो एक एक्लै अधीनमा छ, र अन्य - डर संग। जबकि हार्मोन स्तर सानो छ, परीक्षण गलत हुन सक्छ, नकारात्मक नतिजा देखाउँदै किनभने प्रत्येक परीक्षणको आफ्नै संवेदनशीलता थ्रेसोल्ड छ। सामान्यतया ढिलाइको पहिलो मितिबाट, स्वयं-निदान को शुद्धता पहिले नै उच्च छ।
फार्मेसीहरूको कर्मचारीहरु, आगन्तुकहरूले प्राय: मद्दत र सल्लाहलाई बदल्छ। यस्तो अपील को एक सामंलिक विषयहरु मध्ये एक निदान र गर्भावस्था योजना हो। यस लेखमा हामीले फार्माकवादीबाट सब भन्दा "लोकप्रिय" प्रश्न र सक्षम उत्तरहरू संकलन गर्छौं।
गर्भधारण निर्धारण गर्न गर्भधारण पछि पहिलो महिनामा गर्भावस्था निर्धारित गर्न - भविष्यको आमाको लागि उपहार। त्यसकारण सही र सुविधाजनक इलेक्ट्रोनिक गर्भावस्था परीक्षण लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्। कुनै गर्भावस्थाको अवधि स with ्केत गर्दै टेस्टको नाम के हो? कसरी सफा परीक्षण कार्य हुन्छ? यो कत्तिको सहि छ? उसको संवेदनशीलता के हो? कस्तो प्रकारको टाइप गर्नुहोस्? यो कहिले परीक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ? यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? सँगै बताउनुहोस्।